Isikhokelo soRhwebo lwe-Forex kubaqalayo ngoJanuwari 2022
Ukuhlaziywa: 1 Disemba 2021 Inyaniso ihlolwe
Eli nqaku liye lahlolwa ukuze libonise olona lwazi luchanekileyo ngexesha lokubhalwa.
Ujonge ukuqala Forex yorhwebo kwi-intanethi, kodwa awuqinisekanga kakhulu ukuba ungaqala ngaphi? Ewe, ngokuqinisekileyo ufike kwindawo elungileyo, njengoko siza kukubonisa yonke into oyifunayo ukuze ufumane umsebenzi wakho wokurhweba kwi-forex kwinyawo lasekunene.
Umzi mveliso ngokwawo ubona iitriliyoni kunye neepawundi ezixabisa iimali zitshintsha izandla mihla le, ke uya kujoyina iimfumba zabathengisi nabathengisi bamaziko ngokufanayo. Umbono ogqwesileyo kukufumana inzuzo ngokuhamba kwamaxabiso phakathi kweemali ezimbini ezikhuphisanayo- ezinjenge-GBP kunye ne-USD.
Nangona kunjalo, sicebisa ukuba sifunde isikhokelo sethu Ukurhweba kwangaphambili kwabaqalayo: Indlela yokuThengisa i-Forex kunye nokufumana eyona Platform ilungileyo ngaphambi kokuba uqalise. Ayisiyi kukunika kuphela i-ins kunye nokuphuma kwendlela esebenza ngayo i-forex, kodwa siza kudwelisa uluhlu lwethu oluphezulu lwe-3 lwabathengi be-forex ye-2021.
Qaphela: Ukufunda indlela yokuchonga amathuba okurhweba kwindawo ye-forex akukho lula. Kungenxa yoko le nto kufuneka ufunde ukuba ungathengisa njani ngokufanelekileyo ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali yakho.
Zithini iingenelo kunye neengozi zorhwebo lwe-Forex?
Inzuzo yokunyuka kwamaxabiso ezemali ezikhuphisanayo
Enye yeemarike zentengiso zamanzi kwihlabathi jikelele
Ngaphezulu kwe-100 + ngababini bemali yokuthengisa
Abarhwebi be Forex baxhasa iindlela zokuhlawula zemihla ngemihla
Iimarike ze-forex zisebenza nge-24/7
Ukukwazi ukwenza ingeniso engaguquguqukiyo akukho lula
I-Forex-ekwabizwa ngokuba yi-'FX ', imele utshintsho lwangaphandle. Kwimo yayo esisiseko, Forex yorhwebo yinkqubo yokutshintshiselana ngemali enye. Umzekelo, ukuba unokutshintsha i-GBP nge-EUR, oku kuya kubonisa urhwebo lwe-forex. Ngale nto ithethwayo, urhwebo lwe-forex yenye yeentengiso zemali ezingamanzi kwihlabathi.
Ngapha koko, iibhanki ezinkulu zithengisa iitriliyoni zeeponti ezixabisa imali mihla le. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba isithuba se-forex sigqibe ukuthengisa urhwebo usuku icandelo. Ngokubalulekileyo, ngoku kuyenzeka ukuba uthenge, uthengise, kwaye urhwebe inqwaba yeemali ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho, kwanakwisixhobo esiphathwayo.
Isiseko esiphambili sokuthengisa i-forex kukuba ucinga ukuba ixabiso lemali enye liza kunyuka okanye lihle liye kwelinye. Ukurhweba ngeFX kukwasekwe kwimarike 'yesibini', eya kubandakanya iimali ezimbini ezikhuphisanayo. Umzekelo, i-GBP / i-USD iyakubona abathengisi beqikelela kwi-pound sterling nakwi-dollar yase-US, kwaye i-EUR / CHF iya kubandakanya i-euro kunye ne-franc yaseSwitzerland.
Ngokumalunga nokwenza inzuzo, kuya kufuneka ucinge ukuba zeziphi iindlela eziza kuhamba ngazo iimarike, emva koko uthathe isigqibo sokuba ufuna ukutyala imali engakanani. Abanye abathengisi be-forex babonelelwa kuphela abathengisi be-newbie, ukuze uqalise ngokuthengisa iiponti ezimbalwa. Le yeyona ndlela ilungileyo yokufunda i-ins kunye nokuphuma kokurhweba i-forex ngaphandle kokubeka esichengeni semali enkulu.
Ungarhweba njani nge Forex?
Njengalo naluphi na olunye udidi lweeasethi olusebenzayo kwindawo yotyalo-mali kwi-Intanethi, eyona nto iphambili kurhwebo lwe-forex kukwenza imali. Kananjalo, kuya kufuneka ukhethe isibini semali osithengisayo, kwaye emva koko uthathe isigqibo malunga nendlela ocinga ukuba ziya kuthengiswa ngayo ziimarike.
Ngaphambi kokuba ubeke urhwebo, kufuneka uqonde ukuba isibini semali sijongeka njani. Iibini ziya kuhlala zineemali ezimbini, kwaye ixabiso lesibini lisekwe kwinqanaba lokutshintsha kwexesha-lokwenyani.
Qaphela: Ukuba ucinga ukuba imali esekhohlo kwicala lesibini izakonyuka ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i-oda 'yokuthenga'. Ngenye indlela, ukuba ucinga ukuba imali esecaleni iya kwanda, kuya kufuneka ubeke i-odolo 'yokuthengisa'.
Umzekelo woRhwebo ngeNgxelo yoThengiso 1: Thenga iodolo kwi-GBP / USD
Ukucoca inkungu, masithi uthatha isigqibo sokurhweba nge-GBP / USD. Kwilizwe le-forex, esi sibini semali saziwa njenge 'The Cable'. Emva kokufunda iitshathi zeentsuku ezisekupheleni, uqinisekile ukuba i-GBP imalunga nokwaphula amandla, oko kuthetha ukuba iimarike zikholelwa ukuba ziya kunyuka kwixabiso xa kuthelekiswa ne-USD.
Nantsi indlela urhwebo lwakho oluza kusebenza ngayo.
I-GBP / USD okwangoku ixabiso kwi-1.40.
Oku kuthetha ukuba kuyo yonke i- $ 1, uza kufumana i-1.40.
Njengoko ucinga ukuba i-GBP iza kunyuka ngexabiso xa ithelekiswa ne-USD, kufuneka ubeke i-oda yokuthenga.
Kungenxa yokuba i-GBP ikwicala lasekhohlo lesibini.
Ugqiba kwelokuba ubambe i- £ 500.
Kwiiyure ezimbini emva kokufaka iodolo yakho, i-GBP / i-USD ngoku ixabisa i-1.50.
Njengoko uthenge iperi xa ibixabiso nge-1.40, oku kubonisa inzuzo ye-7.14%.
Ke ngoko, urhwebo lwakho lwe- $ 500 lwenze i- $ 35.70 kwinzuzo.
Qaphela: Njengoko ubona kumzekelo ongentla, wenze inzuzo kuba [A] ubeke i-oda yokuthenga kwi-1.40 kwaye [B] i-GBP / i-USD inyuke yaya kwi-1.50.
Umzekelo woRhwebo lwaMaphondo 2: Thengisa uMyalelo kwi-GBP / USD
Ukugcina izinto zilula, masinamathele kumzekelo omnye kwi-GBP / USD. Kuphela ngeli xesha, siza kufaka i-odolo 'yokuthengisa'. Ngoba? Kungenxa yokuba sicinga ukuba ixabiso le-USD liza kunyuka ngokuchasene ne-GBP. Yilapho izinto zidideka khona.
Nangona sicinga ukuba i-USD iyakwenza njalo Nyusa, sifuna izinga lotshintshiselwano ukuze sihambe phantsi. Kungenxa yokuba i-USD ikwicala lasekunene lesibini, oko kuthetha ukuba inqanaba lotshintshiselwano lusekwe kwiidola, hayi iipawundi.
Ngale nto ithethwayo, masiqwalasele umzekelo okhawulezayo wendlela i-GBP / USD yokuthengisa iodolo inokujongeka ngayo.
Njengoko sikholelwa ukuba i-USD iya kunyuka kwixabiso, sifuna ukuba i-GBP yehle.
Oku kuthetha ukuba sibeka i-oda yokuthengisa.
Kwakhona, sabamba i- £ 500 kurhwebo.
Kamva ngaloo mini, i-GBP / i-USD yehla yaya kwi-1.35.
Yiyo kanye le nto besiyifuna, njengokuncipha kwenqanaba lotshintshiselwano kuthetha ukuba i-USD iya isomelela ngokuchasene ne-GBP.
Sonwabile ngokuzuza kwethu, sithathe isigqibo sokuvala iodolo yethu ngenzuzo ye3.57%.
Kwisibonda sethu se- $ 500, senze i- £ 17.84 kwinzuzo.
Qaphela: Njengoko ubona kulo mzekelo ungentla, senze inzuzo xa ixabiso le-GBP / i-USD liwile, kuba sibeke iodolo yokuthengisa.
Iibini ze-Forex zokuThengisa: ii-Majors, abancinci, kunye ne-Exotic
Ke ngoku uyazi ukuba indlela yokuthenga kunye nokuthengisa isebenza njani, ngoku kufuneka sicinge ngohlobo lweemali esifuna ukuzithengisa. Kwilizwe lokurhweba ngeFX, oku kwahlulwe ngokwamacandelo amathathu- ubukhulu, abancinci, kunye nezinto ezingaqhelekanga.
Iimali ezithengiswa kakhulu kwihlabathi ziyaziwa njengeemali ezinkulu. Oku kubandakanya ukuthandwa kwe-GBP, i-EUR, i-USD, i-JPY, kunye ne-CHF. Ngokwesi sibini uqobo, ii-majors ziya kuhlala zineemali ezimbini eziphambili. Umzekelo, i-GBP / i-USD okanye i-USD / JPY.
Amashishini okurhweba ahlala ekhetha ukhetho olusengqiqweni xa usaqala. Kungenxa yokuba ii-majors ziyaxhamla kweyona mali inkulu yokuhlawula amatyala, ethi yona ikhokelele ekuqineni
. Sukuba nexhala, siza kukugubungela ukusasazeka kweenkcukacha kamva.
Abancinci banamanzi amancinci kancinci kunamajors. Elinye icala lesibini esincinci liya kuba nemali enkulu, kwaye elinye icala liya kuba nemali ebuthathaka. Umzekelo, i-USD / NZD iya kubandakanya idola yaseMelika njengeyona mali iphambili, kwaye idola yaseNew Zealand iya kubonisa imali engamanzi engaphantsi.
Ukuba unomnqweno ophezulu wokufumana umngcipheko, unokufuna ukuqaphela ukurhweba ngababini abangaqhelekanga. Oku kubandakanya imali enye enkulu njenge-GBP, kunye nemali evelayo njengeLira yaseTurkey. Izibini ezingaqhelekanga zifunwa kakhulu kumaziko emali, oko kuthetha ukuba ukusasazeka kuya kuba phezulu kakhulu.
Uya kufumanisa ukuba izibini ezingaqhelekanga zithandeka ngakumbi kunezikhundla eziphezulu kunye nabantwana. Kananjalo, inzuzo kunye nelahleko yakho ziya kwandiswa.
Kukuthini ukusasazeka kwi-Forex?
Elinye lamagama aqhelekileyo asetyenzisiweyo kwisithuba se-forex yile 'yokusasazeka'. Ungayikhumbula indlela esikunike ngayo umzekelo wokuthenga nokuthengisa iodolo ngaphambili kwisikhokelo sethu. Ewe, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa. Ukuba uyazibuza ukuba kutheni kukho umahluko, oku kungenxa yokuba abathengisi be-forex benza imali yabo ekusasazeni.
Ngokwemigqaliselo, ngokubanzi isithuba phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso, ngakumbi uhlawula ngokungathanga ngqo kwimirhumo. Umzekelo, masithi intengo yokuthenga ye-EUR / USD yi-1.10, kwaye ixabiso lokuthengisa yi-1.11. Oku kuthetha ukuba ukusasazeka kwexabiso kuye kwi-0.9%.
Nangona kunjalo, kwihlabathi lokurhweba kwangaphambili, asibhekiseli ekusasazeni njengepesenti ngentetho nganye. Ngokuchasene noko, sibala ukusasazeka kwee 'pips'.
Qaphela: iPip imele 'ipesenti kumanqaku'. Eli lelona xabiso lincinci apho isibini semali sinokuhamba kwindawo yentengiso evulekileyo.
Ubalo oluthile lwepip lusekwe kwimali ekuthethwa ngayo. Ngale nto ithethwayo, nasiphi na isibini esinexabiso kwi-USD siya kubona isixa semibhobho esi-1 ukuya kwi- $ 0.0001. Ukuba uyazibuza ukuba kutheni iqhezu elincinci lisetyenziselwa ukumisela umbhobho, le yindlela esebenza ngayo urhwebo lwe-forex.
Uyabona, kwimizekelo yokurhweba esele siyenzile ukuza kuthi ga ngoku, sichazile amaxabiso ethu ngeedesimali ezimbini (ezinje nge-1.40, 1.35, njl.). Nangona kunjalo, urhwebo lwe-forex lusekwe kukuhamba kwexabiso elincinci, okuthetha ukuba uninzi lwezibini luphuma luye kwiidesimali ezi-4.
Kungcono ukuba sijonge umzekelo okhawulezayo wendlela iipips ezisebenza ngayo.
Umzekelo wePips kwi-Forex
Masithi sithengisa ii-Euro xa kuthelekiswa nedola yaseMelika, ke siya kukhetha isibini se-EUR / USD. Siyakholelwa ukuba i-EUR iyakwenyuka ngexabiso xa ithelekiswa ne-USD, ke kuya kufuneka sibeke iodolo yokuthenga.
Sibeka i-oda yokuthenga kwi-EUR / USD kwi-1.2050
Njengoko ubona, i-EUR / USD iphuma iye kwiidesimali ezi-4
Kananjalo, ngalo lonke ixesha idesimali yokugqibela ihamba ngo-1, iya kubonisa ipayipi enye.
Umzekelo, ukuba i-EUR / USD isuke kwi-1.2050 yaya kwi-1.2053, oko kuya kubonisa iipipsi ezi-3.
Umzekelo wokusasazeka usebenzisa iiPips
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba kukusasazeka kunye nepip, yintoni ngoku esinokukunika umzekelo wehlabathi lokwenyani. Ukugcina izinto zilula, masinamathele kwi-EUR / USD.
Njengoko sithengisa i-EUR / USD, i-oda yokuthenga iya kubonisa ukuba sicinga ukuba i-EUR iya kunyuka ngexabiso ngaphezulu kwe-USD.
Kwangokunjalo, ukuthengisa ukuthengisa kuya kuthetha ukuba sicinga ukuba i-USD iya kunyuka kwixabiso elingaphezulu kwe-EUR.
Ngaphambi kokuba sibeke urhwebo lwethu, kufuneka sibale ukusasazeka.
Ixabiso lokuthenga ngu-0.1590, kwaye ixabiso lokuthengisa ngu-0.1600.
Oku kuya kubonisa umohluko we-0.0010
Kananjalo, ukusasazeka ziipipi ezili-10.
Njengabanye abathengisi ababonelela ngeepips ze-0.7 nje kwi-EUR / USD, oku kubiza kakhulu!
Ukufaka isicelo kuXabiso xa ukurhweba kwangaphambili
Ke ngoku ukuba uqonda ngokuqinileyo ukuba urhwebo lwe-forex luza kusebenza njani, kunye nokuqonda kokubini ukusasazeka kunye neepipi, ngoku siza kuphonononga amandla. Ngamafutshane, ubungakanani buvumela ukuba urhwebe ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Uboleka imali ngokufanelekileyo kwi-forex broker ukuze wandise imida yakho.
Kwelinye icala, oku kungakhokelela kwinzuzo enkulu ukuba urhwebo luya kukunceda. Nangona kunjalo, inokubangela ilahleko enkulu ukuba kwenzeka okwahlukileyo. Kananjalo, kuya kufuneka ulumke kakhulu xa usebenzisa ubungakanani kumashishini akho. Ngapha koko, ngaphandle kokuba unokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela yokusetha ielahleko zokuyeka ukurhweba, kuya kufuneka uthintele ubungakanani obupheleleyo.
Ngaphambi kokuba sichaze ukuba ungakanani umrhumo oza kukwazi ukuwusebenzisa xa uthengisa i-forex, makhe sijonge umzekelo okhawulezileyo wezorhwebo.
Umzekelo wokusebenzisa amandla okurhweba kwi-Forex
Masithi sithengisa i-GBP / i-USD. Ukugcina izinto zilula, siza kuthi ireyithi yokutshintshiselana yangoku yi-1.50.
Siqinisekile ngexabiso elizayo le-GBP, ke sithathe isigqibo sokubeka i-oda yokuthenga.
Ityala lethu lilonke lifikelela kwi- £ 250.
Njengoko sisebenzisa amandla kwi-10: 1, sisebenza ngokurhweba nge- £ 2,500, nangona sibeka kuphela i-250 yeepawundi njengomda.
Ngexesha losuku, i-GBP inyuka nge-2%.
Kworhwebo lwe- $ 250, oko kufikelela kwinzuzo ye- $ 5.
Nangona kunjalo, njengoko sisebenzise umyinge we-10: 1, inzuzo yethu iyandiswa ukuya kwi- £ 50 (£ 5 x 10)
Olukhulu njengorhwebo oluyimpumelelo olunokubakho kwiingeniso zakho, umngcipheko uphezulu kakhulu. Kungenxa yokuba iilahleko zakho zinokwandiswa-kwaye ngokukhawuleza. Xa sibeka urhwebo oluxhuzuliweyo, kufuneka sibeke umda. Kumzekelo ongentla, le yayiyi-10% yobungakanani bezorhwebo iyonke, njengoko umyinge we-10: 1. Kwangokunjalo, ukuba uxhathiso lwaluyi-25: 1, urhwebo lwe- $ 25,000 lwaluya kufuna i-1,000 XNUMX yephawundi.
Qaphela: Umngcipheko wokurhweba kunye nomgangatho unokuncitshiswa kakhulu xa ufaka ilahleko enengqondo yokumisa.
Ukuba urhwebo lwakho luye lwachasana nawe, umngcipheko wokulahlekelwa ngumgama wakho xa uwonke. Oku kuyakwenzeka ukuba urhwebo lwakho luhlangabezana nelahleko elingana nenani lomda. Umzekelo, ukuba umda wakho ufikelela kwi-20% (20: 1), kunye nexabiso le-odolo yakho lehlisiwe ngama-20% kwindawo yentengiso evulekileyo, uya kuphulukana nomda wakho.
Ukunyuswa kweMida ye-Forex
Ukuba uhlala e-UK kwaye ke usebenzisa i-forex broker elawulwa liGunya lokuZiphatha kwezeMali (FCA), emva koko yorhwebo ntengiso iqonga liya kudinga ukuthobela imida yokunyanzeliswa ebekwe liGunya lezoKhuseleko laseYurophu kunye noGunyaziso lweeMarike (ESMA).
Oku kuthintela umyinge wokulinganisa ukuya kwi-30: 1 kwiibini eziphambili, kunye ne-20: 1 kuzo zombini abantwana kunye ne-exotic.
Imirhumo yokuRhweba nge Forex
Ukuze uthengise i-forex kwi-intanethi, kuya kufuneka usebenzise umthengisi okwi-Intanethi. Ikwabizwa njengeqonga lokurhweba, abarhwebi baya kukuhlawulisa umrhumo wokusebenzisa iinkonzo zabo. Umrhumo othile uya kwahluka kwi-broker-to-broker, nangona zihlala zibandakanya enye yezi zinto zilandelayo.
Ngokungafaniyo neeCFD, konke-kodwa-okuqinisekileyo ukuba umthengisi wakho uya kukuhlawulisa ikhomishini yokuthengisa i-forex. Oku kuhlala kusekwe kubungakanani bezorhwebo lwakho, kwaye kubalwa njengepesenti.
Umzekelo, masithi ikhomishini iyi-0.5%, kwaye ixabiso lorhwebo lwakho yayili- £ 1,500. Oku kuya kuthetha ukuba uyakuhlawula i- £ 7.50 ukuvula urhwebo, emva koko ufumane enye i-0.5% xa usiva isigqibo sokuyivala.
Nangona sele sixoxe ngendlela ukusasazeka okusebenza ngayo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le yimali eyongezelelweyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Umzekelo, masithi uthengisa i-EUR / USD, kwaye ukusasazeka ziipipi ezimbini. Ukuba ubeke i-odolo yokuthenga, ixabiso le-EUR / USD liya kudinga ukunyuka ngeepipi ezi-2 ukuze nje uphule.
Kananjalo, xa i-odolo yakho yokuthenga iqala ukwenziwa, uya kuba ziipipsi ezi-2 ezantsi. Kwangokunjalo, ukuba ubeke i-odolo yokuthengisa kwaye ukusasazeka kwakuyipips ezimbini, kuya kufuneka ube kwixabiso le-EUR / USD ukuya ezantsi ngeepips ze-2 ukophula nje.
Commission Ubuncinci beKhomishini
Nangona ikhomishini esisiseko ehlawuliswe ngumyinge we-forex broker inokubonakala ngathi ikhuphisana, amanye amaqonga aya kufuna ubuncinci bekhomishini inyanga nenyanga. Umzekelo, ukuba ubuncinci ikhomishini yenyanga iyi- $ 10, kodwa uhlawula kuphela i-7 yenyanga yonke, kuyakufuneka uhlawule i $ 3 eyongezelelweyo ukogquma ukusilela.
Fe Imirhumo yokuxhasa ngemali ngokuhlwa
Ukuba uthatha isigqibo sokufaka isibonelelo kumashishini akho e-forex, kwaye ugcina indawo ivulekile ubusuku bonke, kuya kufuneka uhlawule imali yokuhlawula. Oku kwahlukile ekubolekeni imali kwibhanki ephezulu yesitalato, kude kuthiwe kuya kufuneka uhlawule inzala kwimali mboleko ekubolekise ngayo.
Kungenxa yoko le nto abarhwebi kunqabile ukuba bagcine izikhundla ezibekiweyo zivulekile ngobusuku bonke, ubuncinci kuba inzala yenza ukuba urhwebo lungasebenzi.
Fe Intlawulo yokuGcina kunye nokuTsala imali
Kuya kufuneka wenze ezinye izinto ngokubhekisele kwimirhumo yedipozithi kunye nokurhoxa. Ngelixa bonke abangabarhwebi bebahlawulisa, abanye bayababiza.
Ukukhetha iqonga lokuthengisa kwangaphambili?
Ngokuqinisekileyo akukho kunqongophala kwabathengisi be-forex abasebenza kwindawo yokurhweba yase-UK. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka ufumane iqonga elilungele iimfuno zakho.
Apha ngezantsi siphule ezinye zezinto eziphambili ekufuneka uzijongile xa ukhetha iqonga lokurhweba kwangaphambili.
Ukuba umthengisi we-forex unqwenela ukwamkela abathengi abavela e-UK, kufuneka ilawulwe yi-FCA. Ukuba ayinalo ilayisensi yeCAFA, thintela umrhwebi ngazo zonke iindleko.
Cinga ngendlela yokuhlawula onqwenela ukuyifaka imali kuyo. Uninzi lwabarhwebi luyakwamkela ukuhanjiswa kwebhanki kunye nekhadi lokuthenga ngetyala, ngelixa abanye bexhasa ii-e-wallets
Ukuphonononga ubume bemirhumo yomthengisi omkhethileyo. Ukuba umrhwebi uhlawulisa ikhomishini, fumana ukuba ingakanani le nto, kwaye nokuba ngaba kukho naziphi na ezona zincinci zenyanga.
Kwimeko efanayo neefizi zokurhweba, kuya kufuneka uphinde uvavanye ukuba loluphi uhlobo lokusasaza iarhente ye forex broker. Abanye babarhwebi abanamaxabiso akhuphisanayo kwindawo yokuhlawulisa indawo ziipayipi nje eziyi-0.7 kwizibini eziphambili.
🥇 Inani leePair Forex
Chitha ixesha elithile ukhangela indawo yokurhweba yomthengisi ukuvavanya ukuba zingaphi izibini ezibonisa kwangaphambili. Sikhetha abathengisi abagubungela uninzi lweejors kunye nabantwana, kunye nenani elifanelekileyo le-exotic.
🥇 Izixhobo zoRhwebo noPhando
Ukuba ujonge ukwenza impumelelo kwishishini lakho lokuthengisa, kubalulekile ukuba ufunde indlela yokusebenzisa izikhombisi zobuchwephesha. Oku kuyakuvumela ukuba uhlalutye amaxabiso ezembali zezibini ozikhethileyo ze forex, kwaye ubone ukuba iimarike zingahamba njani ngokulandelayo.
Awunalo ixesha lokuphanda umrhwebi wakho? Qiniseka ukuba uphonononge amaqonga amathathu okurhweba ngaphambili esiwacebisileyo ngezantsi.
Ukuba uthathe ixesha lokufunda isikhokelo sethu kwiNtengiso ye-Forex yabaQalayo, kuya kufuneka ngoku uqonde ngokuqinileyo ukuba ishishini lisebenza njani. Sichaze yonke into ekuthengeni nasekuthengiseni iiodolo, ukusasazeka, iipipi, amandla, kunye nokubaluleka - umngcipheko wokurhweba kwi-Intanethi.
Sikwacacisile ukuba zininzi izinto ekufuneka uzijongile ngaphambi kokukhetha umthengisi we-forex omtsha. Oku kukuvumela ukuba wenze uphando lwakho eqongeni ngaphambi kokuvula iakhawunti. Ukuba awunalo ixesha lokwenza oku, sikwabonise ezona zikhetho zethu zintathu zi-3 ze-Forex broker ezikhethiweyo ze-2021.
Ekugqibeleni, qiniseka ukuba uhlala ufaka ii-odolo zokuyeka ilahleko xa usenza urhwebo nge-forex- ngakumbi ukuba usebenzisa amandla. Ngokwenza njalo, uya kunciphisa isixa semali osilahlekeleyo kurhwebo olungaphumeleliyo.
Ndiyifaka njani imali kwi-Forex broker?
Uninzi lwabathengi be-forex luxhasa ukuhanjiswa kweakhawunti yebhanki kunye neebhanki / amakhadi etyala. Abanye baya kuxhasa i-e-wallets njengePayPal.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokufunda ukurhweba kwangaphambili?
I-intanethi ixineke ngolwazi olukhululekileyo malunga nendlela yokuthengisa i-forex. Ngokuchitha ixesha elifunekayo lokuphanda imeko nganye kwi-forex, uya kuma elona thuba lilungileyo lokufumana imali kwimpazamo ende. Ngale nto ithethwayo, kufanelekile ukuba uthathele ingqalelo ikhosi yokurhweba kwangaphambili ukuba ufuna ukukhawulezisa inkqubo yokufunda.
Yeyiphi eyona idipozithi encinci efunekayo kwiqonga lokuthengisa kwangaphambili?
Uya kudinga ukufaka ubuncinci i- $ 100 ukuze uqalise kumthengisi we-forex.
Ngaba abathengi be-forex abakwi-Intanethi bakhuselekile?
Ukuba umthengisi we-forex okhethiweyo ukhonza abathengisi base-UK, kuya kufuneka ilawulwe yi-FCA. Oku kufanele ukuba kuza neNkqubo yoKhuselo lwaBatyali ukuya kuthi ga kwi-50,000 XNUMX yeepawundi kwimeko apho umrhwebi ethe wonakala.
Yeyiphi esona sibini sithengisa kakhulu?
Esona sibini sithengisa kakhulu kwi-forex ngoku yi-EUR / USD, ebizwa ngokuba yi-'Fiber '.
Ungakanani umrhumo endinokuwusebenzisa kwizibini eziphambili ze-forex?
Ukuba ungumrhwebi othengisa e-UK, uya kufakwa kwinqanaba le-30: 1 kwizibini eziphambili. Nangona kunjalo, ukuba uthathwa njengomrhwebi oqeqeshiweyo, unokunyuka uye kuthi ga kwi-500: 1.
Ndiyirhoxisa njani inzuzo yam yokurhweba ngaphambili?
Ngokomthetho wokuchasana nemali ngokungekho semthethweni, kuyakufuneka urhoxise ibhalansi yomthengisi wakho we-forex ubuye kwindlela efanayo oyisebenzisileyo ukuyifaka.